किन पुरुषलाई यौन’सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? जान्नुहोस्
Homeसमाचारकिन पुरुषलाई यौन’सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? जान्नुहोस्
October 28, 2020 admin समाचार 7471
महिला र पुरुष’बीच यौन’सम्पर्क भइसके’पछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कति’पय महिला’हरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । यौन’सम्बन्ध राख्नेवि’त्तिकै महिलालाई अंगा’लो नहाली वा कुरा’कानी नगरी निदाउने पु’रुषप्रति महिलाह’रुको धारणा फरक हुने गर्छ ।
जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तो’षी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्त’वमै यौन’सम्पर्क राख्ने’वित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई यौन’सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ?
सामान्य’तयाः रातको समयमा यौनस’म्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । यौन’सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको प’हिलो कारण यहि नै हो । तर, यौन’सम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनस’म्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको श’रीरमा भिन्न प्रकारको प्रति’क्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उत्ते’जित हुन्छ र महिलाहरु यौनसम्ब’न्धपछि झन् बढी पुरु’षको मायामा पर्छन् ।
पुरुष अग्रानिज्म भने यौ’नस’म्बन्धपछि इज्याकुलेट हुन्छ र हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जसले शरीरमा आल’स्यता पैदा गर्छ साथै यौन’सम्पर्कको दौरान शरीर निकै थाक्ने भएकाले पुरुष’हरु छिट्टै निदाउने विभिन्न अनुसन्धा’नमा उल्लेख छ । -rato पाटी बाट
अस्पतालबाटै बाहिरियो सियोना श्रेष्ठको दुनिया रुवाउने भिडियो (भिडियो हेर्नुहोस)
धन कमाउन भनी दक्षिणकोरिया गएका ज्ञानेन्द्र दशैँकै दिन कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा भए
December 20, 2020 admin समाचार 5591
लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तको आवा’जमा ‘मैले रुँदा आँसु पुछ्थ्यौ, हाँस्दा सँगै हाँस्थ्यौ’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वज’निक गरिएको छ । बरिष्ठ गीतकार हिराकाजी थापाको शब्द तथा बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको संगीतमा ‘मैले रुदा’ गीत
प्रेम दिवसलाई १ करोड रुपैयाँको गुलाफको माग, ६० लाखको आ’यत
February 9, 2021 admin समाचार 4714
प्रेम दिवस (प्रणय दिवस) फेब्रअरी १४ आउन ४ दिन बाँकी छ । यस दिन प्रेमी जो’डीहरुले एक–अर्कालाई फूल, कार्ड र उपहार स्वरुप विभिन्न सामानहरु आद’नप्रदान गर्ने चलन छ । सोही अव’सरमा यस दिन करोडौं रुपैयाँको
September 6, 2020 admin समाचार 11821
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218838)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (210479)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (210170)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (208982)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (207764)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205141)